Mateu 2 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Pashure pokunge Jesu aberekwa muBhetrehema+ reJudhiya mumazuva amambo Herodhi,+ tarira! vazivi venyeredzi+ vokumativi okumabvazuva vakasvika kuJerusarema, 2 vachiti: “Aripiko iye akaberekwa ari mambo+ wevaJudha? Nokuti takaona nyeredzi yake+ patakanga tiri kumabvazuva, uye tauya kuzomupfugamira.” 3 Achinzwa izvi Mambo Herodhi akavhunduka, pamwe chete neJerusarema rose; 4 uye aunganidza vapristi vakuru vose nevanyori vevanhu, akatanga kuvabvunza kwaizoberekerwa Kristu. 5 Ivo vakati kwaari: “MuBhetrehema+ reJudhiya; nokuti uku ndiko kunyorwa kwazvakaitwa pachishandiswa muprofita zvichinzi, 6 ‘Asi iwe, haiwa iwe Bhetrehema+ renyika yeJudha, hausi guta risingakoshi zvikuru pakati pevatungamiriri veJudha; nokuti mauri muchabuda mutungamiriri,+ achafudza+ vanhu vangu, vaIsraeri.’” 7 Herodhi akabva ashevedza vazivi venyeredzi pachivande, akanyatsowana kwavari nguva yokuoneka kwenyeredzi; 8 uye paakavatuma kuBhetrehema, akati: “Endai munonyatsotsvaka mwana wacho muduku, uye kana mamuwana mudzoke, mundiudze, kuti neniwo ndiende ndinomupfugamira.”+ 9 Pavakanga vanzwa mambo, vakaenda; uye tarira! nyeredzi yavakanga vaona pavakanga vari kumabvazuva+ yakavatungamirira, kusvikira yamira pamusoro penzvimbo yaiva nomwana muduku. 10 Pavakaona nyeredzi vakafara kwazvo. 11 Uye pavakapinda mumba vakaona mwana muduku aina amai vake Mariya, uye vakawira pasi, vakamupfugamira. Vakasunungurawo pfuma yavo vakamupa zvipo, ndarama nezvinonhuhwirira zvichena nemura. 12 Asi vakadzokera kunyika yavo neimwe nzira, nokuti vakanga vanyeverwa naMwari+ vachirota kuti varege kudzokera kuna Herodhi. 13 Pashure pokunge vaenda, tarira! ngirozi yaJehovha+ yakazviratidza kuna Josefa achirota, ichiti: “Simuka, tora mwana muduku naamai vake utizire kuIjipiti, ugare ikoko kusvikira ndakuudza kuti udzoke; nokuti Herodhi ava kuda kutsvaka mwana muduku kuti amuparadze.” 14 Naizvozvo akasimuka, akatora mwana muduku pamwe chete naamai vake usiku, akaenda kuIjipiti, 15 uye akagara imomo kusvikira pakufa kwaHerodhi, kuti zvizadzike+ zviya zvakataurwa naJehovha pachishandiswa muprofita wake, achiti: “Ndakashevedza mwanakomana wangu kuti abude muIjipiti.”+ 16 Herodhi, achiona kuti akanga anyengerwa nevazivi venyeredzi, akabva ashatirwa kwazvo, akatuma vanhu, akaita kuti vakomana vose vaiva muBhetrehema nomumaruwa aro ose vaurayiwe, kubvira pazera remakore maviri zvichidzika, maererano nenguva yaakanga anyatsowana kuvazivi venyeredzi.+ 17 Zvino zviya zvakataurwa pachishandiswa muprofita Jeremiya zvakazadzika, zvokuti: 18 “Inzwi rakanzwika muRama,+ kuchema nokuungudza kukuru; akanga ari Rakeri+ aichema vana vake, uye akanga asingadi kunyaradzwa, nokuti vakanga vasisipo.” 19 Zvino Herodhi afa, tarira! ngirozi yaJehovha yakazviratidza kuna Josefa achirota+ muIjipiti, 20 ikati: “Simuka, tora mwana muduku naamai vake, upinde munyika yaIsraeri, nokuti vaya vaitsvaka mweya womwana muduku vakafa.” 21 Naizvozvo akasimuka, akatora mwana muduku naamai vake, akapinda munyika yaIsraeri. 22 Asi achinzwa kuti Akerausi akanga ava mambo weJudhiya panzvimbo pababa vake Herodhi, akatya kuenda ikoko. Zvakare, anyeverwa naMwari achirota,+ akaenda munharaunda yeGarireya,+ 23 uye akasvika, akagara muguta rinonzi Nazareta,+ kuti zvizadzike zvakataurwa pachishandiswa vaprofita, zvichinzi: “Iye achanzi wokuNazareta.”+